Malunga Nathi - AIKA Apparel Co., Ltd.
I-AIKA Apparel Co., Ltd.
AIKAifinyeziwe njenge-AK, indawo yethu yokuqala kukuvumela abantu behlabathi bahloniphe kwaye bathandane ngakumbi ngenxa yokufaneleka, kwaye emva koko bakhuthaze imidlalo yesizwe, ukuze wonke umntu abe yinkosi yezemidlalo!
AIKA EZEMIDLALOngumvelisi weempahla zokomelela osebenza kumboneleli wokomelela osuka kwihlabathi liphela. Siziingcali ekwenzeni inkonzo yesiko ekunxibeni kwezemidlalo, ukunxiba kweyoga, ukunxiba ejimini, uqeqesho & nokubaleka ukunxiba, ukunxiba nje okuqhelekileyo.Umsebenzi wokudibanisa, ubuhle, kunye nezixhobo zokusebenza, sisekupheleni kwekamva lefashoni yokuqina.Senze imodeli engabizi kakhulu evumela ukuba abathengi bethu bafumane iimpahla eziphezulu zokusebenza ngaphandle kwexabiso eliphezulu.
Kwi-2008, saseka umzi-mveliso wezemidlalo phantsi kwegama elithi AIKA.Ekuqaleni kokusekwa, besingenawo amava emveliso, kodwa emva kokuba siqhubekile nokufunda kunye nokufunda ubugcisa bezinye iimpawu zezemidlalo ezidumileyo, ngokuthe ngcembe siye safumana ubuchule bokuthunga obukhethekileyo.Ukuza kuthi ga ngoku, siye sazisa oomatshini bokuthunga abaninzi abakhethekileyo, kuquka inaliti ezine, imisonto emithandathu, i-sew, i-sidecar, njl., Ukuze sikwazi ukujongana ngokulula neemfuno zenkqubo ekhethekileyo yabathengi abaninzi kwixesha elizayo.
Ngo-2010, saqala ngokucotha ukukhetha abasebenzi abathungayo abagqwesileyo njengamandla angundoqo wolawulo lomgangatho wemveliso yeworkshop yethu, saza sabanika imivuzo ephezulu ukuqinisekisa ukuba umgangatho weemveliso zabathengi bethu unokuba neziqinisekiso zemveliso ezihambelanayo.Kwangaxeshanye, malunga nokuhlolwa kwe-QC yeemveliso ezigqityiweyo, sihlala sithatha wonke umthengi ngokungathí sina ukuqinisekisa ukuba iimveliso zabo zinokuthengiswa ngokugqibeleleyo.
Ngo-2015, njengoko sasikhula kwitekhnoloji yemveliso yempahla yezemidlalo, saqala ukuseka isebe lezorhwebo langaphandle kwaye saqala ukoyisa iimarike zethu zaphesheya.Emva kweminyaka emibini yokuqokelela amava, ngokuthe ngcembe siye sathandwa ngabathengi abaninzi baphesheya kweelwandle, ngakumbi ukuqondwa kunye nokuxatyiswa komgangatho wethu, nto leyo ethe yasinika ukuzithemba okukhulu kwimarike yaphesheya.
Ukusukela ngo-2019, besinomthamo owomeleleyo wemveliso kunye nokuguquguquka okuphezulu.Sikwanazo nesakhono esomeleleyo sokwamkela iiodolo zesixa esincinci.Okwangoku sinemveliso yeeyunithi ezingama-50,000-100,000 nyanga nganye Sikwasebenza ngokusondeleyo neefektri ezili-10 ezingakumbi.Umsebenzi wethu we-QC unokuphicotha zonke izigaba zemveliso ukuba imveliso yenziwa ngaphandle.
inkcubeko yethu yefektri emithathu engundoqo.
simisele eyethu inkqubo yokurekhoda onke amava kwiminyaka yethu kunye neminyaka sisenza iinkcukacha esihlala sigcina ingqalelo esemgangathweni engqondweni ngokusekelwe kula mava adlulileyo.Kwakhona sineqela lethu lokuhlola ukuba lenze i-100% yokuhlola umgangatho kwaye siqinisekise ukuba yonke intambo inqunywe ngononophelo, kwaye yonke imilinganiselo ingenziwa ngaphakathi kokunyamezela, yonke into ngaphandle kwengxaki yokucima njl ngaphambi kokuthunyelwa.
Sinamaqela ethu esebe lorhwebo lwangaphandle, anokunxibelelana nabathengi ngokuthe ngqo ngesiNgesi nge-imeyile okanye ngefowuni.Bonke ngabaqulunqi abaphezulu beempahla zezemidlalo kwaye bayazi iinkcukacha zengubo, unxibelelwano luba lula kwaye lusebenze.Ke kufuneka usixelele into oyifunayo, siza kusingatha zonke apha nawe!
Isampulu ingagqitywa phakathi kwe-7-10 yeentsuku zokusebenza.Impahla eninzi ingagqitywa phakathi kweentsuku zokusebenza ze-20-25.Kwakhona sinomthengisi wethu ochwepheshayo, unokukunika indlela efanelekileyo yenqanawa kwaye uqinisekise ukuba iimpahla zingakhuseleka kwaye zikhawuleze. ngenqanawa.
Idilesi :Igumbi A, umgangatho 3, iSakhiwo E, iYongqin Industrial Zone, Binhai Avenue, Humen Town, Dongguan
Pls uyawuthemba umsebenzi wethu, sinokukunika ukuba ufuna ngentliziyo epheleleyo!
Iingcamango zabathengi ziyatshintsha, uyilo kunye nokutshintsha kwelaphu, umgangatho wethu awusoze utshintshe!I-Aika Apparel, ukhetho lwakho oluhle!
Imveliso engakumbi !